macOS Yakakwira Sierra beta 3 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
Apple ichangoburitsa macOS Yakakwira Sierra 10.13.2 mune yayo yechitatu vhezheni yevanogadzira, vhiki mushure mekutanga beta, uye pasi pevhiki mbiri mushure mekutanga zviri pamutemo vhezheni 10.13.1 yeApple's operating system.
Kunyangwe iwo marongero achaunzwa neshanduro itsva 10.13.2 zvisati zvajeka, zvingangoita kunge zvinosanganisira akawanda bug fixes uye software performance performance, nekudaro nekuvandudza kushomeka kwakaratidzwa neakautangira.
Kuti uwane iyi vhezheni itsva, unogona kurodha pasi beta kubva ku Apple Dudziro Center, pane iro rairo Apple peji, kana pane yakajairwa hwaro kana iwe uine iyo inodikanwa mbiri yacho.
Pfungwa huru yekuvandudzwa kwekambani yeCompertino-yakavakirwa, uye chikonzero chekuvandudzwa kweiyi betas yekuyedza yevanogadzira, iko kuchengetedzeka kwesoftware yedu uye nekuvandudza mukuita kwekombuta yedu, zvinangwa zvakagadzirirwa vhezheni yapfuura yakaburitswa. Maviri chete mavhiki apfuura. Uye zvakare, macOS High Sierra yakauya ne "emojis" nyowani yatinogona kutonakidzwa nayo kubva kuMac yedu.
Ndinovimba idzo nyaya dzisina kugadziriswa neshanduro 10.13.1 dzinogona kugadziriswa mushure mekuburitswa kwekupedzisira kweshanduro 10.13.2 mumavhiki anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » macOS Yakakwira Sierra beta 3 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira